ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး စိုးရိမ်ကြောင်း ကုလ ကိုယ်စားလှယ်ပြောကြား
ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms Yanghee Lee ကိုတွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးအထူး ကိုယ်စားလှယ် Ms Yanghee Lee က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်နဲ့ မွတ်စလင်တွေအကြား ရာသက်ပန်ခွဲခြား မှှုဖြစ်ပေါ်လာမှာကို စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်း မနေ့က ပြော ကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူက ဗုဒ္ဒဘာသာနဲ့ မွတ်စလင် လူမှှုအသိုင်း အဝန်း ၂ ခုအကြား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို အမြန် ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့လည်း မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ၁ဝ ရက်ကြာ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်က ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာမနေ့ညနေက သတင်းစာ ရှင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ ခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Ms Yanghee Lee က မြန်မာပြည်မှာ အမှန် ပကတိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေ ကို ပိုမိုသိရှိလိုတဲ့အတွက် လာရောက်ခဲ့ တာဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိရဲ့ ပထမဆုံးခရီးစဉ်အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် အစစအရာရာ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တဲ့ မြန်မာအစိုးရကို လှှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ဒီခရီးစဉ်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ မန္တလေးတိုင်းတွေကို သွားရောက်ကြည့်ရှှု့ခဲ့သလို အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ လူမှှုရေးအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်သူက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှှုရေးကဏ္ဏတွေ အံ့သြဖွယ်ရာ တိုးတက် ပြောင်းလဲခဲ့တာကို မိမိတို့သိရှိပါကြောင်း၊ အခုလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှှုဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှှုတွေကို ကျော်လွှားအောင်မြင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာရဲ့အားပေးကူညီမှှုတွေ ပိုမိုလိုအပ်တယ်လို့ ဒီခရီးစဉ်အတွင်း မိမိကိုလူအများအပြားက ပြောကြားခဲ့တာကိုလည်း ပြန်လည်တင်ပြမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားရင်း တပြိုင်နက်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ပြောင်းလဲမှှုတွေကို ထိခိုက်ပျက်ပြားနိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို အခုစိုးရိမ်ပူပန် စွာ မြင်တွေ့နေရကြောင်း၊ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲရေးမှာ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒသဘောထားဖော်ထုတ် ခွင့်တွေ၊ လွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်တွေ ရရှိခဲ့တာကိုထူးခြားတဲ့ တိုးတက်မှှုအဖြစ် အားလုံးကရှှုမြင်ခဲ့ကြပါကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် လတ်တလောမှာ စာနယ်ဇင်းသမားတွေ ထောင်ချဖိနှိပ်တရားစွဲခံရမှှုအပါအဝင် အဲဒီလွတ်လပ် ခွင့်တွေ ပြန်လည်လျှော့နည်းသွားခဲ့တာကို သတိပြုမိကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသူတွေကို စစ်တပ်ကမုဒိမ်းကျင့်မှှု၊ အမျိုးဘာသာကူးပြောင်းရေးနဲ့ လွတ်လပ်စွာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်ရရှိရေး လှှုပ်ရှားသူတွေကို ခြိမ်းခြောက် မှှုတွေရှိနေတယ်လို့ ကြားသိရကြောင်း၊ လယ်ယာမြေ သိမ်းပိုက်ခံရလို့ ဆန္ဒပြသူတွေကို အပြစ်ပေး တာတွေ ထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေ ကျန်ရှိနေတာတွေလည်း သိရှိရကြောင်း စသဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်နဲ့ မွတ်စလင်အသိုင်းအဝန်း ၂ ခုလုံးရဲ့ပြောကြားချက်တွေကို သူမ အလေးအနက် ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်အမြင်တွေကို အသေအချာ သဘောပေါက် နားလည်ချင်လို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်တခုဖြစ်နေတာကို သိရှိခဲ့ ရသလို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရေ၊ မီး၊ အိမ်သာစတဲ့ အခြေခံလိုအပ်မှှုတွေ မရရှိခဲ့ ကြကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ အခြေအနေအလွန်ဆိုးဝါးနေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် Ms Yanghee Lee ကပြောပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာသူက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မွတ်စလင်တွေအပေါ် ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှှုတွေရှိနေကြောင်း၊ မွတ်စလင်တွေအနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်၊ လက်ထပ်ခွင့်၊ လယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှှုံးနေကြကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ မွတ်စလင်တွေ နှိပ်စက်ခံရပြီး တရားဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှှုံးနေတယ်လို့လည်း ကြားခဲ့ရကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် သူမကို အာဏာပိုင်တွေက ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကို အစိုးရအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိတဲ့အတွက် အဲ့ဒီ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးစွဲခြင်းမပြုဖို့ ထပ်တလဲလဲပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ တကယ်တော့ သူမသိရှိထားတဲ့ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေသတွေအရဆိုရင် လူနည်းစုတွေမှာလည်း လူမျိုး ဘာသာကွဲပြားမှှုကို အခြေပြုပြီး သူတို့လူမျိုးအမည်ကို သူတို့ဖာသာ လွတ်လပ်စွာ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ခွင့်ရှိပါကြောင်း ပြော ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
အခုခရီးစဉ်က တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ ထပ်မံရရှိတဲ့အချက်တွေကိုဖြည့်စွက်ပြီး ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းကျင်းပမယ့် ၆၉ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာ အစီရင်ခံ တင်ပြမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း Ms Yanghee Lee ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Aug 19, 2014 01:35 AM
နိုင်ငံတော်ကို ပညာဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်၊ သီလဂုဏ်တို.ဖြင့် ပြည့်စုံသူများ ဦးေဆောင်အုပ်ချူပ်နိုင်ပါစေ။
Jul 28, 2014 08:20 PM
တကယ်တော့ သူမသိရှိထားတဲ့ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေသတွေအရဆိုရင် လူနည်းစုတွေမှာလည်း လူမျိုး ဘာသာကွဲပြားမှှုကို အခြေပြုပြီး သူတို့လူမျိုးအမည်ကို သူတို့ဖာသာ လွတ်လပ်စွာ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ခွင့်ရှိပါကြောင်း ပြော ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။. I strongly oppose your comment because these illegal Chittagongnian Bengali Muslims are not belonging to Myanmar Indigenous People. They are not eligible for that new creation of name with fake stories. Their using this term is old title of Arakanese (Rakhine)and they have committed an"Identity Thief."
“ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူး” ဆိုတဲ့ စကားတွေဟာ ငြင်းမရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို ဖေါ်ပြနေတာပါ။
Jul 27, 2014 01:57 PM
ရခိုင်ကစလို. နေရာတော်တော်များများမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးအသွင်ဆောင် ဆူပူအုကမ်းဖက်မှုတွေဟာ အတွင်းအကြောင်းသိတဲ့ နိုင်ငုံကီးတခုက အတွင်းလူကို မက်လုံးပေး ဖြားယောင်းသွေးဆောင် လုပ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။
Jul 27, 2014 10:01 AM